Galvo Laser Muchina - Goridhe Laser
Tube / Pipe Laser Kutema Muchina
Metal Sheet Kucheka
CO2 Galvo Laser muchina rinoshandiswa achiita zvokutemera, zvichiratidza uye nokuveza michina Textiles, zvipfeko, dehwe, shangu, motokari, kapeti, sandpaper, mapepa makadhi, kushambadza uye mamwe maindasitiri.
Yakashongedzerwa ne CO2 RF simbi laser sosi uye yepamusorosoro Galvanometric musoro, uchishandisa matatu-akabatana ane simba anotarisa galvanometer yekugadzira tekinoroji, Goldenlaser's Galvo laser system ndiyo indasitiri mutungamiri mune tekinoroji nhanho.
Yedu Galvo laser system yakagadzirirwa laser kugadzira ine yakanaka saizi saizi, hombe yekushanda renji uye yakakwirira kuchinjika Iine maficha ekumhanya chaiko uye isingaenzaniswi kumhanya uchienzaniswa neye gantry laser system (XY axis laser kuronga).
Muenzaniso Nha .: JMCZJ (3D) 160100LD
CO2 Galvo Laser Machine ine Conveyor kuti achiita zvokutemera Kucheka
3D simba Galvo Laser hurongwa
Imwe nguva yekugadzirisa nzvimbo 450 × 450mm
Anokwanisa musono splicing kusvika 1600mm
Tenderedza kumonera kugona
Galvo & Gantry Laser achiita zvokutemera Kucheka Machine for Textile, Leather
Iyi laser system inosanganisa galvanometer uye XY gantry. Iyo Galvo inopa yekumhanyisa yekuveza, etching, perforating uye kucheka kweonda zvinhu. XY Gantry inobvumidza kugadzirisa kweakakura maficha uye mukobvu wakasimba.
Muenzaniso Nha .: ZDJMCZJJG-12060SG
SuperLAB | XY Gantry & Galvo Laser muchina ine CCD Kamera
SuperLAB, yakasanganiswa laser yekumaka, laser yekuveza uye laser kucheka, iri CO2 laser yekugadzirisa nzvimbo yeisiri-simbi. Iine mashandiro ekumiswa kwechiono, imwe kiyi kururamisa uye otarisisa ...
Muenzaniso Nha .: ZJ (3D) -170200LD
Galvo Laser Leather achiita zvokutemera Kucheka Muchina weShuu Viwanda
Wepamusoro kumhanya uye Huru fomati laser yekuveza, perforating uye kucheka. Dual kutyaira system ine giya rack mamiriro. Yakagadziriswa galvanometer system.
Yakakura-nzvimbo galvanometer kuongorora maitiro. Multiple laser masosi ekuwedzera kugadzirwa. Otomatiki kudyisa uye kudzoreredza - conveyor…
Muenzaniso Nha .: ZJJG (3D) 170200LD
Galvo Laser Kucheka uye Perforating Muchina weJersey Fabric
Mushini weLaser wakachinjika uyo unogona kutema, kunyora, kupenda uye kutsvoda -cheka majezi, polyester, microfiber, kunyange yakatambanudza machira.
Muenzaniso Nha .: ZJJF (3D) -320LD
Lace Laser Kucheka Muchina weWarp Yakarukwa Keteni, Tafura
Imwe michina inogadziriswa yakavakirwa pane tambo inoratidzira kuziva algorithm uye laser galvanometer yekugadzirisa musanganiswa.
Copyright © 2005-2020 Wuhan Golden Laser Co, Ltd. Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.